'Umcuphi oyinyani' Ixesha lesi-3: Indlela uMahershala Ali Aphoswa ngayo kwi-HBO Series - Itv
Eyona Itv Indlela uMahershala Ali Aqiniseke ngayo 'uMcuphi oyinyani' Showrunner ukuba amphose kwiXesha lesi-3
Indlela uMahershala Ali Aqiniseke ngayo 'uMcuphi oyinyani' Showrunner ukuba amphose kwiXesha lesi-3
UMahershala Ali walwela indima ekhokelayo kwii-HBO's Umcuphi wokwenene ngeli xesha lonyaka.Ikhasi likaWarrick
Ubukhulu becala, ixesha lesithathu ekulindwe ixesha elide le-HBO's splashy crime anthology Umcuphi wokwenene ibiyi buyela kwifom . Yayingeyonto ibambekayo kuzwelonke eyayilixesha lokuqala, kwaye yayingenguye nomlilo ohlekisayo owawusenziwa ngumzamo wokuqaqambisa. Kodwa, ibekwe kamnandi embindini, iSizini 3 yangqineka iyiyo ibali elibandakanyekayo edityaniswe ngumyili wothotho kunye nomboniso weNic Pizzolatto kunye nomboniso onamandla kaMahershala Ali.
U-Ali, ogoduke nee-Oscars ezintathu zokugqibela zeGcisa eliXhasa uMsebenzi, uthathwa ngokuba uyintandokazi yokutyumba u-Emmy ngomsebenzi wakhe okhethekileyo kumdlalo. Kodwa ukubandakanyeka kwakhe akuzange kube yinto eqinisekileyo; kuvela ukuba iPizolatto yayiqale ibhale isimilo sikaWayne Hayes emhlophe. Kumdlalo weqonga wangoku ujikeleze nge Intatheli yaseHollywood , I-Pizolatto ityhile ukubekeka kwakhe kwindawo yokuqala malunga nokuphosa u-Ali kunye nendlela umdlali weqonga amqinisekisa ngayo ukuba uyindoda elungileyo kulomsebenzi.
Ndamxelela ukuba ndiyawuthanda umbono, eyona nto indixhalabisayo kukuba kumaxesha esiphila kuwo, eli libali elimalunga nexesha kunye nenkumbulo nothando, kwaye andizukufuna ukuba ezo zihloko zixhaswe kuba ngequbuliso sibalisa ibali Lo ngumyalezo malunga nohlanga, ucacisile. Kwaye andicingi ukuba ndingumntu ofanelekileyo ukwenza loo nto, kunjalo. Uthe, 'Hayi, andifuni ukuyenza lo nto.' ngombala, indima abayinyulileyo ichazwa ngokobuhlanga. 'Ukuba ndidlala umcuphi, ndidlala umcuphi omnyama.'
Ngeli xesha uPizolatto kunye no-Ali baqhubeka nokuxoxa ngemixholo esesandleni, umbonisi wabuyela kwibhodi yokuzoba ukuze abone ukuba utshintsho luya kulunga njani ngaphakathi kwimbali ebhalwe ngokuqinileyo awayeyakhile. Ekugqibeleni, wafumanisa ukuba umkhokeli wase-Afrika waseMelika unokongeza ukuqaqamba kumlinganiswa kunye nebali elinokuthi lijikeleze ngokupheleleyo zombini ngendlela ebengakhange ayicinge ngaphambili.
Yayiyincoko emfutshane ndathi nje, 'mandiyokuphinda ndibhale iziqendu ezithathu zokuqala kwaye masibone.' Ndaze ndabona ke, 'Oo, isebenza kakuhle. Unomdlali wombala kuloo ndima. Ndingamcinga ukuba kufuneka alawulwe kakhulu kuneqabane lakhe ekuphenduleni kwakhe ebantwini. Iqabane lakhe linokuba nemvakalelo kwaye licaphuke-yena akakwazi. Kwaye uhlala esecaleni, ujonge kancinci, kodwa oko kumnika nethuba lokuba abe ngumbonisi osondeleyo. Ke, bendinombulelo kuba ebeyifuna lendima, kwaye yandinceda ukuba ndivule umsebenzi wam ngeendlela endinokuba neentloni ngazo, ndinikwe intetho jikelele ekhoyo kumaqonga ezentlalo.
Ixesha lesithathu le Umcuphi wokwenene I-avareji yezigidi ezi-1.2 zababukeli abaphilayo kunye nenqanaba le-.36 kubathengisi abanobuhlobo kwi-18 ukuya kwi-49 yabantu. Ngokubhalwa kwale nto, ngumboniso wesithandathu we-HBO obonisa eyona nto ibalulekileyo ngokwe-demographic ephambili kunye neyesine ekubukelwe kuyo ngokubhekisele kubabukeli abaphilayo kunyaka.
Hayi, aBantu soze baFezekise uKhenketho lwe-Interstellar
Ngaba iGerrymandering ngokungafanelekanga ayifanelekanga kwiidemokhrasi?
Intombazana eneebhaluni zebhanki
iselfowuni yokujonga umva simahla
Ikhephu ekhaya amazinyo amhlophe
ukutya okuncinci kwe-carb kudiniwe ngalo lonke ixesha
Eyona oli ye-cbd yezilwanyana zasekhaya
Ngaba uTom hiddleston ucule ngaphakathi ndabona ukukhanya